googler ဖြင့် Google ရှာဖွေခြင်း၊ ဂူဂဲလ်ဆိုဒ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဂူဂဲလ်သတင်းများ | Linux မှ
Luigys toro | | applications များ, GNU / Linux များ
ငါတို့ရှိသမျှသည်အစ်ကိုကြီးကိုသိသည် Google ကျွန်ုပ်တို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ / အမုန်းတရားနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာရှိသော်လည်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူများနှင့် ပတ်သက်၍ သိလို။ သိလိုသူ၊ Google Search ကို, Google Site Search y Google ကသတင်းများကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ GNU / Linux terminal မှကျေးဇူးတင်ပါသည် ဂူဂယ်
1 googler ကဘာလဲ?
2 Googler features
3 googler ထည့်သွင်းနည်း
3.1 တရားဝင် repository မှ googler ကို Install လုပ်ပါ
3.2 googler ကို package manager များနှင့်ထည့်ပါ
4 googler အသုံးပြုနည်း
googler အတွက်လုပ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ် Python နှင့် အမျိုးမျိုးသော access ကိုခွင့်ပြုပါတယ် tools တွေ google ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှတဆင့် (Google Search, Google Site Search နှင့် Google News) သည်တရား ၀ င်မဟုတ်သော tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး google နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဆိုလိုတာကငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal မှဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ဤဆိုဒ်များကိုတိုက်ရိုက်ရှာဖွေပါ, ဒီကိရိယာသည်ရလဒ်တစ်ခုစီအတွက်ခေါင်းစဉ်၊ URL နှင့်အနှစ်ချုပ်ကိုပြလိမ့်မည် Terminal မှ browser ကိုတိုက်ရိုက်ဖွင့်ပါ.
ရလဒ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည် ဂူဂယ် ၄ င်းတို့သည်အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရှာဖွေခြင်း၊
googler ၎င်းသည် graphical environment သို့မဟုတ် server မရှိသောအသုံးပြုသူများသည် site များမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းသည် terminal browsers နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါပေမယ့် googler၊ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအသုံးဝင်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကန ဦး ရည်ရွယ်ချက်များတွင်မထည့်သွင်းထားသောအခြားအရာများစွာအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
googler ရှာဖွေမှုများကိုအစီအစဉ်များ၊ ရက်စွဲများ၊ ရလဒ်အရေအတွက်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအဆင်ပြေစွာသန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်နှင့်ကြော်ငြာများမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
Google Search၊ Google Site Search၊ Google News
လျင်မြန်သော tool ကို, console ကိုနှင့်သန့်ရှင်းသောအရောင်များကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်အတူ
ရှာဖွေမှုရလဒ်များစာမျက်နှာများကို omniprompt မှသွားနိုင်သည်
ရလဒ် n နံပါတ်ဖြင့်ရှာဖွေပါ၊ မည်သည့်နံပါတ်ကိုပြသမည်ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။
ရှာဖွေမှုများကိုကြာချိန်၊ နိုင်ငံ / သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒိုမိန်းတိုးချဲ့မှု (ကန့်သတ်ထားသော - .com) အရကန့်သတ်ပါ
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုများကိုသော့ချက်စာလုံးများဖြင့်ထောက်ပံ့သည် - filetype:mime, site:somesite.com စသည်တို့ကို
ဖြစ်နိုင်သည်က၎င်းသည်ပထမဆုံးရလဒ်ကိုဘရောင်ဇာ (ဖွင့်သည်) တွင်တိုက်ရိုက်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည် ငါကံကောင်းလာမယ် )
HTTPS proxy ထောက်ခံမှု
ဂူဂယ် Python 3.3 နှင့်အထက်လိုအပ်သည်
တရားဝင် repository မှ googler ကို Install လုပ်ပါ
တရားဝင် repository မှကူးယူရန်ဖိုင်များကို git မှတဆင့်ကူးယူရမည်။
ပြီးရင်အောက်ပါ Command တွေကိုလုပ်ရမယ်။
googler ကို package manager များနှင့်ထည့်ပါ
AUR Arch Linux အတွက်
ဂူဂယ် ၎င်းကို configure လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Terminal ရှိ command များ၏အသုံးပြုမှုအားလုံးကို run ခြင်းဖြင့်သင်ယူနိုင်ပါသည်
တူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် googler ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာများရှိသည်
ရှာဖှေ 15 ရလဒ် နောက်ဆုံးအတွက် updated 14 လအတွင်းစ 3er ရလဒ် ကွင်းဆက်အဘို့ အခမဲ့ဆော့ဝဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကို blog.fromlinux.net တွင်:
နောက်ဆုံးပေါ်ကိုဖတ်ပါ NOTICIAS Linux အကြောင်း
b ရှာဖွေမှုရလဒ်၏ IPL ပုရစ်တွင်ရလာဒ်များ Google ကအိန္ဒိယ en အင်္ဂလိပ်:
googler သည်လက်တွေ့ကျသောအသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည်။ ထို့ထက်ကားဂရပ်ဖစ်အင်တာဖေ့စ်မရှိသောဆာဗာများပေါ်တွင်တစ်ခုခုကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုစုံစမ်းလိုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အမြဲတမ်းရှိသည့်အဖြေတစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » googler ဖြင့် Google Search, Google Site Search နှင့် Terminal မှ Google News
Gentoo မှာပါ။ ငါ့အပေါ်မှာသာ
ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုပေမယ့် duckduckgo ဘို့ရှိပါသလား ??
openSUSE Tumbleweed သည်၎င်း၏အသံ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်